UVictoria Daineko waduduzwa ngemuva kokuhlukanisa ezandleni zika-Alexei Chadov
Ngokuphindaphindiwe abaqondisi ngokuvamile bacela abadlali abangenzi-professional ezithombeni zabo. Ngakho umdali we-comedy ethandwayo "Uthando EGadini Elikhulu" uMarius Vaisberg sekuyisikhathi eside esebenzi nje ngabadlali, kodwa futhi nabahlabeleli.
Kulolu chungechunge oluthi "Uletny Crew" Weisberg wamenywa endimeni yowengumkakhe wangomlingisi oyinhloko uVictoria Daineko.
Umsebenzi omusha weza ngesikhathi esifanele, ngoba uVictoria wayekade eshade nomyeni wakhe, uDmitry Kleiman, ukuze angaphazamisi imizwa emisha.
Ngaphandle kwalokho, umculi on the set waphumelela ukuqaphela iphupho lakhe eliyigugu ...
Abathandi bakaVictoria Daineko baxoxisana no-Alexei Chadov
Ku-Victoria Dayneko, lokhu kuyisibonelo sokuqala sokuqopha kochungechunge. Umxhwele umculi, kodwa osebenza nabo kusayithi ukumsiza ngalendlela. U-Vika wabelane ngemininingwane yenqubo yokuqopha kubhulogi yakhe:
... kufanele sibonge uMqondisi Marius Weisberg ngokungithembela ngenye yamaqhawe alolu chungechunge oluhle kakhulu! Futhi ngokubambisana nabangani bami abasebenzelana nabo ngokubekezela kwabo ngesiteleka sokuqala, ngubani ongazi lutho ngalolu daba nhlobo, kodwa uzama kahle kakhulu. Kuyinto ewubuqili ukuba yingxenye yaleso project, nakuba ngikhathazekile ngalesi simo njengasekuqaleni komsebenzi wokuqala.
Futhi uVictoria Daineko ubembulele abalandeli bakhe imfihlo eyinhloko - ulokhu ephupha isikhathi eside ngokumanga u-Alexei Chadov:
Kungokuthi ngiphupha cishe iminyaka engu-10 ukuba ngimange u-Alexei Chadov, futhi ukudubula kulolu chungechunge kwakuwukuphela kokukhetha.
Ngeshwa, akukacaci - bamanga uDaineko noChadov, noma okwamanje. Ezithombeni ezenziwa ngu-Vika ku-Instagram yakhe, ukumanga kwamaqhawe wehlaya elizayo akuthunjwa.
Ngesikhathi esifanayo, ababhalisile be-Instagram Daineko sebeseqalile ukwenza amaphuzu afinyelele kakhulu kumdlalo womculi nomlingisi:
lyna66613 Ngabe wenza umbhangqwana omuhle kakhulu 😊😉oba nge-experience, izingane))) ❤
Venera_fb Yebo, iklasi kwaba umbhangqwana! Futhi mhlawumbe kuyoba!
melamori_sg chadov😍😍n pair of you turned out❤️🔥🔥🔥🔥👍
dasty0605 Bukeka kahle ndawonye!
Kukhona ithuba lokulandela ngokucophelela ama-instigrams kaVictoria Dayneko no-Alexei Chadov - kungenzeka ukuthi abaculi bazolalela iseluleko sabalandeli babo. Siphawula ku-Zen le ndaba 👍 futhi sihlale siqaphela zonke izinkathazo nezisulu zokuhweba ibhizinisi.
UTatyana Ovsienko oneminyaka engu-51 ubudala ushaqeka ngesithombe sama-90s ashintshile ngaphandle kokuqaphela
UVictoria Bonet kwadingeka aziphendulele ngokuzithandela, ividiyo
UMiranda Kerr ufundise u-Ivan Urgant ukwenza i-selfies ne-makeup
U-Natalia Podolskaya wabonakala kuqala esiteji ngemuva kokubeletha
UVladimir Putin - 64! Uphi inkinobho?
U-Agniya Ditkovskite akayazi ukuthi isehlukaniso siyothinta kanjani indodana yakhe
UBenedict Cumberbatch noSophie Hunter baba abazali
Ubulili namadoda amabili - kungani abesifazane besifuna
Konke ngamavithamini: ukudla okunomsoco
I-Pasta ngekhilimu ne-anyanisi sauce
Ngabe abagulayo bangabantu abesilisa nabesifazane?
Amandla okucabanga nokuthonya kwabathandekayo
Amama omama avame ukukhononda ngokudla komntanakho ompofu
Ukuhlupheka kwe-Jeweled: iqoqo le-Les Bles de Chanel imihlobiso
Izambatho zangaphansi zabesifazane zentambo 2015: izitayela zamanje
Inhliziyo yomama, noma imijikelezo eyisikhombisa yesihogo
Indlela yokupheka i-jelly kusuka ku-jam nesitashi?
I-pasta ye-cheese ibhaka kuhhavini
Izindlela zomphakathi zokwelapha amaphuzu ekhaleni
I-Horoscope: i-scorpion, owesifazane ngo-2010